Daawo:Xildhibaano Maamulka Khaatumo ka tirsan oo iyaga Hargeysa jooga Hadalo yaab leh warbaahinta ka yidhi iyo arrinta wada hadalka-Video | | Horufadhi Online
Wednesday, August 30th, 2017 | Posted by ho
Daawo:Xildhibaano Maamulka Khaatumo ka tirsan oo iyaga Hargeysa jooga Hadalo yaab leh warbaahinta ka yidhi iyo arrinta wada hadalka-Video
Maxamuud Axmed Yaasin kana mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Khaatumo oo hargeisa kula hadlay Warbaahinta ayaa ku Faanay inay diyaar yihiin Wafdiga Wadahadalka Somaliland Kula jira, Inay Ku Biiraan hadii la Helayo Somaliland Cusub Siduu hadalka u dhigay.
Wuxuu soo jeediyey la dar-dargeliyo Wadahadalka Khaatumo iyo Somaliland, si loo Ilaaliyo Midnimada Somaliland, “Soomaaliland la wada leeyahay hadii la waayo, Khaatumo dib ayay u tashan doontaa “ Ayuu yidhi.
Wuxuu eedayn kala duldhacay Madaxwayne ku xigeenkii Hore ee maamulka Khaatumo Cabdale Maxamuud Haybe (Cagolule), Wuxuuna sheegay inaysan Jirin xil uu hada ka hayo khaatumo uuna yahay Qof shacab ah.
Maamulka Somaliland ayuu ku eedeeyay Dhibaatooyinka Amni daro ee ka dhaca magaalada Laascaanood Iyo Gobolka Sool, xili ay deegaankaasi ka joogaan ciidamo kala duwan oo badan.
Xubnaha kasoo jeeda deegaanada khaatumo ee ka tirsan maamulka Somaliland ayuu sheegay inay u arkaan Shaqaalle uu siilaanyo magacaabay, Wuxuuna Xusay inay iyagu Khaatumo ahaan u doodayaan Beelaha ku dulman Somaliland siduu hadalka u dhigay.
Hadalka Xildhibaan ayaa u muuqda mid Hadba dhinac ka imaanaya, Kaasi oo isagu Intuu Warsaxaafadeedka waday Hadba dhinac u Leexiyey, Waxaana Bulshada deegaanada SSC Shaki badan ay ka qabtaa Qorshaha Wadalka Somaliland iyo Khaatumo ee isugu Biya shubtay Soomaliland Cusub.
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=50152
Posted by ho on Aug 30 2017. Filed under wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
3 Comments for “Daawo:Xildhibaano Maamulka Khaatumo ka tirsan oo iyaga Hargeysa jooga Hadalo yaab leh warbaahinta ka yidhi iyo arrinta wada hadalka-Video”
August 30, 2017 - 3:11 pm
Xildhibaanada iyo wasiirada, waxay jecel yihiin soo qufaya, yaan lagu eedayn, maamulka. Maamulka Khatumo waa dawlad, waa inay xadido dadka afkooda ku hadlaya. Waxaan daawaday wasiirka arrimaha debeda ee USA, mar wax laga weydiiyey meeshii Nazi ku kulmeen iyo dhinacii kale ee ku mudaharaaday iyo waxa uu ka yidhi madaxweynaha USA, wuxuu ku jawaabay Tillerson ” Madaxweynuhu wuxuu ka yidhi iclaamka, waa ra`yigiisa, ee ma aha siyaasada dawlada USA. Calaa kullin, qolyaha iska hadlaya waa wax ku kooban iyaga, keliya, ee ma aha siyaasada maamulka Khatumo…period. WBT
August 30, 2017 - 5:01 pm
Asc. Waar ma findhicilkiibaad weli hadal haysaan xaaraantinimadiisa?! Baabkaasu waa xidhmay, in la sheeg sheegana ma mudna. Ciddii aan horu u fahamsanayn, ee huuhaada loogu sheekayn jiray, uun baa ka ARGAGAXDAY meesha loola galay.
Hadalkii oo kooban, nin shaqa tagay Dhulbahante kuma cusba waana laga socon jiray. Marakan, waa inoo shirkeennii iyo Buuhoodle insha Allah. Hawl kama daalooyin, eegga, qabyo waa halkeedii.
August 30, 2017 - 5:42 pm
Saaxiib ama Abti, Shir ma jiro. Wali ma magacii baad ku kaluumaysanaysaa.
Wixii ka horeeyey dawladii Sheekh Shariif, koonfur waxay ku adkaysan jireen, in mar walba zero laga soo bilaabo, iyo maya fedral. Laakiin caalamkii ba ka diiday dagaal ogayaashii, Baydhabo ayaana ilkihii lagaga guray, Waagii C/laahi Yuusuf. Haddana waa kuwaa ogolaaday, ee la jaan qaaday dawladnimada. Waxaan u sooqaty reer Khaatumo hadda waxay leeyihiin system dhisan, waa in systemku shaqeeyo, oo ninkii hunguri ka hayo, la yidhaahdaa ummadan maxaad u wadaa. Kana yeeli mayno Bilaadu bint baan ka socdaa iyo Isaaq baan kaba qaad u ahay, iyo koonfur oo caalamku inaga gooyey baanu isku xanjaynaynaa. Waa in qofkii han siyaasadeed ku jiro, isagoon wax burburin, uu la xisaabtamaa maamulka iyo iclaamka uu u marsiiyo shacabkiisa dhaliilaha maamulka. Dadkana ka iibiyaa wuxuu wado. Ma aha iyadoon laga fiirsan, waxa iman kara, shar iyo khayr. Shir baanu qabanaynaa…WBT